ခရီးသွားဆောင်းပါး | ဟန်ဆန်း
ကျွန်တော်နဲ့ GOOC 2010 ASIA & AFRICA ခရီးစဉ်
လက်နက်နဲ့ အဝတ်အစားတွေကို ထုတ်ယူတဲ့အခါ အဝတ်အစားထုတ်ပေးတဲ့ လူတွေက စာရေးသူကို အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားလားလို့ မေးလာပြန်တယ်။ မဟုတ်ဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံကလို့ ဖြေလိုက်တော့။ သူဘယ်လို အတွေးပေါက်သွားတယ် မသိဘူး။ သူ့လူတွေကို မင်းတို့ မြန်မာလာလို့ လိုက်မေးနေလေရဲ့။
January 6, 2016 in ခရီးသွားဆောင်းပါး.
နုကျန်း၊ နမ့်ခုမ်း၊ ဆာလဝင်း အမည်ရသော မြစ်သံလွင်
သံလွင်မြစ်ပေါ်ရှိ ရတနာစက်လှေပေါ်သို့ ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ကယန်း၊ မွန်၊ ရှမ်း၊ ပအို့ဝ်၊ ဝ အစရှိသည့် တိုင်းရင်းသားလူငယ် များနှင့်အတူ စုရုံးရောက်ရှိသောနေ့တွင် သံလွင်မြစ်ပြင်ကို ဖြတ်သန်းတိုက်ခတ်လာသော လေနုအေးသည် နှလုံးသားထိတိုင်အောင် လန်းဆန်းအေးမြစေသည်။
April 25, 2015 in ခရီးသွားဆောင်းပါး, ဆောင်းပါး.
ရကောက် ရသရထားကြီး ပျော်ပျော်စီး
မြို့ပတ်ရထားဖြင့် ရသအစုန်အဆန် ရေးသူဖတ်သူဆွေးနွေးပွဲ သွားရမည်ဆိုကတည်းက ကဗျာဆရာ မောင်ချောနွယ်၏ ရထား၊ စာရေးဆရာ ရဲသျှမ်း၏ ကျွန်တော်အချိန်သူခိုး၊ ဖေဖေနှင့်တူတူ ငယ်ငယ်ဘဝက တိုးဝှေ့စီးခဲ့ရသည့် မြို့ပတ်ရထားကြီးကို တစ်ခုတ်ရမှတ်မိလာခဲ့သည်။ မီးရထားခရီးဖြင့်
September 14, 2014 in ခရီးသွားဆောင်းပါး, စာပေဆောင်းပါး, စာပေအတွေး, ဆောင်းပါး.